အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ၈ THC ထုတ်ကုန်များသည်ငါ့ပြည်နယ်တွင်တရားဝင်သလား။
စာရေးသူ Saul Meshach
Update ကို6/ 30 / 2021
နီဗားဒါးပြည်နယ်သည်ရောင်းချခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုတားမြစ်ထားသည်ဟူသောသတင်းအချက်အလတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 8 THC ထုတ်ကုန်များ။ အပန်းဖြေဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောပြည်နယ်များသည်သူတို့၏တရားမ ၀ င်အကာအကွယ်ကိုအတူတူကာကွယ်ရန်ပိုမျှော်လင့်နိုင်သည် TAX ရက်ကက်မရ။ ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြေငြာရသေးဘူး။ ဒါကငါ့စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ဆီကငါ့ဆီပို့တဲ့စာ
Update ကို6/ 8 / 2021
တက္ကဆက်ဥပဒေပြုအဖွဲ့ကလုပ်ရန်ငြင်းဆန်သည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 8 THC တရားမဝင်သော
နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: မေလ 25, 2021
Delta-8 THC ကိုလက်ရှိ MOST STATES တွင်တရားဝင်ထားပြီး၊ အချို့ပြည်နယ်များကတားမြစ်ချက်များ (သို့) ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ ဤသည်မှာ Red Emperor CBD ၏ကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်ဥပဒေအားလုံးကိုလိုက်နာရန်မှာသင်၏တာဝန်သာဖြစ်သော်လည်းဖယ်ဒရယ်ဥပဒေရေးရာမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ၈ -THC သည် CBD နှင့်အပင်၏အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကိုတရားဝင်ဖြစ်စေသော ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဥပဒေအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးအထူးသဖြင့်တရားမဝင်သေးတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာ Delta-8 THC အကြောင်းသတင်းဖြန့်ပေးပါ။ သူတို့သည်မစ္စစ္စပီပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်၌လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မရှိဘဲလူမည်းအမျိုးသားအားဆေးခြောက် ၁ အောင်စကိုပေးခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ။ https://nypost.com/2021/05/13/court-upholds-life-sentence-for-man-convicted-of-marijuana-possession/
ဤတွင်လက်ရှိတွင်သုညတားမြစ်ချက်များသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ချက်များပါ ၀ င်သောပြည်နယ်များစာရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် 8 THC ပြည်နယ်အလိုက်တရား ၀ င်
Delta 8 သည်အပြည့်အဝတရားဝင်သည်
Alabama Yes အဘယ်သူမျှမ
Alaska အဘယ်သူမျှမ Yes
Arizona အဘယ်သူမျှမ Yes
Arkansas အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ
Colorado အဘယ်သူမျှမ Yes
Connecticut ဟုတ်ကဲ့ Yes
ဆုံ အဘယ်သူမျှမ Yes
ကိုလံဘီယာ၏ခရိုင် Yes Yes
Florida Yes အဘယ်သူမျှမ
Georgia Yes အဘယ်သူမျှမ
Idaho အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ
Indiana Yes အဘယ်သူမျှမ
Iowa အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ
Kansas Yes အဘယ်သူမျှမ
Kentucky အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ
Louisiana Yes အဘယ်သူမျှမ
Minnesota Yes အဘယ်သူမျှမ
Mississippi Yes အဘယ်သူမျှမ
Missouri Yes အဘယ်သူမျှမ
montana အဘယ်သူမျှမ Yes
Nebraska Yes အဘယ်သူမျှမ
Nevada ၆/၃၀/၂၁ တွင် Update မရှိပါ Yes
New Hamshire Yes အဘယ်သူမျှမ
New Mexico Yes အဘယ်သူမျှမ
နယူးယောက် မီးခိုးငွေ့များကန့်သတ်ထားသည် Yes
North Carolina Yes အဘယ်သူမျှမ
North Dakota Yes အဘယ်သူမျှမ
Ohio Yes အဘယ်သူမျှမ
Pennslyvania Yes အဘယ်သူမျှမ
Rhode Island အဘယ်သူမျှမ Yes
South Carolina Yes အဘယ်သူမျှမ
South Dakota Yes အဘယ်သူမျှမ
မြဝတီမြို့နယ် Yes အဘယ်သူမျှမ
Texas Yes အဘယ်သူမျှမ
Utah အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ
Vermont အဘယ်သူမျှမ Yes
Virginia Yes အဘယ်သူမျှမ
Washington ဟုတ်ကဲ့အကြံပေးသာဖြစ်ပါတယ် Yes
West Virginia အဘယ်သူမျှမ အဘယ်သူမျှမ
Wisconsin Yes အဘယ်သူမျှမ
Wyoming Yes အဘယ်သူမျှမ
Delta-8 THC သည် ၂၀၁၈ လယ်ယာဥပဒေ၌တရားဝင်ရောင်း ၀ ယ်သောအပူဆုံးရောင်း ၀ ယ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်လာသည်၊ ၎င်းသည်လူကြိုက်များသောပြည်နယ်များကတားမြစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ အံ့သြစရာကောင်းသောအပိုင်းသည် Delta 2018 ထုတ်ကုန်များကိုတရားဝင်ဆေးခြောက်များတားမြစ်ထားသောပြည်နယ်များစွာဖြစ်သည်။ အကြောင်းပြချက်? ၎င်းသည်၎င်းတို့သည်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များထံမှစုဆောင်းထားသော ILLEGAL အခွန်အားလုံးကိုဖြတ်တောက်နေသည်။ မင်းကဖက်ဒရယ်ရာဇ ၀ တ်မှုတစ်ခုကို ၀ န်ခံတဲ့အတွက်မင်းရဲ့အချိန်ဇယား ၁ ဆေးဖိုးနဲ့မင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအခွင့်အရေးတွေကိုချိုးဖောက်တာမင်းမြင်တယ်။ တကယ်တော့မင်းဆေးခြောက်ဒေါ်လာသန်း ၂၀ ကျော် Delta THC 8 ကိုရောင်းရင်အမေရိကန်အစိုးရဟာ Federal King Ping Law အရမင်းကိုကွပ်မျက်နိုင်တယ်။ ကြည့်ပါ The Great Marijuana Tax Robberyမရ။ အနီရောင်ဧကရာဇ်က Delta-8 ပြည်နယ်များသည်လက်ရှိတွင်တရားဝင်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသောမီးမောင်းထိုးပြထားသောမြေပုံတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်သည်။
Delta-8 THC sa သည်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေသော cannabinoid ဖြစ်ပြီးလျှော်ပင်မှလာသည်။ Donald Trump က 2018 Farm Bill တွင်တရားဝင်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် CBD ကဲ့သို့ပြည်ထောင်စုဥပဒေအောက်တွင်တရားမ ၀ င်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Delta 8 တွန်းလှည်းများနှင့်စျေးကွက်ရှိအခြားထုတ်ကုန်အများစုသည်ပြုပြင်ပြီး ဖြစ်၍ ထုတ်ယူခြင်းမခံရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Delta-8 THC သည် CBD မှပြောင်းလဲသွားသည်၊ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွစေသောအရာများနှင့်မူးယစ်စေသောအရာများသည်အချို့နိုင်ငံများအားတားမြစ်ပိတ်ပင်ရန်ကြိုးစားသည်။
အပန်းဖြေဆေးခြောက်တရားမ ၀ င်ရောင်းချသောပြည်နယ်များတစ်ဝိုက်ရှိ CBD စတိုးဆိုင်များသည်သူတို့၏ CBD စတိုးဆိုင်များကိုကုန်တိုက်များအတွင်း၌ပင်ရောင်းရန်သတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ DEA သည် Orange Book တွင်ရှိသည်ဟုဆိုသောကြောင့်စွန့် ဦး တီထွင်သူများကိုကြောက်ရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ၀ ါရှင်တန်၊ ကော်လိုရာဒိုနှင့်အခြားပြည်နယ်များစွာ၌ပြောင်းရွေ့သွားသော FEDERALLY ILLEGAL ဆေးခြောက်အကြောင်း SHIT ဟုမပြောသင့်တာသင်သတိပြုမိသည်။ DEA သည်တရား ၀ င်ဆေးခန်းအများစုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ယူဆသည်။ DEA အေးဂျင့်တစ် ဦး သည် Marijuana Market သို့တရားဝင် ၀ င်ရောက်မည်ဟု ODD တွင်တွေ့ခဲ့သလား။ မင်းငါ့ကိုငါးပုတ်နံ့ရတယ်လို့မင်းမထင်ဘူးလား။
သူသည် Google [Danny The Worlds's dumbest Sntich] ကဲ့သို့ DUMB နှင့်တူသည်။ Watson?
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာရောင်း ၀ ယ်သူများသည်အမြတ်ငွေအားလုံးကိုဆေးခြောက်ရောင်းချခြင်းကြောင့်အကျဉ်းထောင်မှလွတ်မြောက်ရန်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာတစ်သန်းမှတစ်ခုမျှသင်သတိမပြုမိပါ။ အနီရောင်ဧကရာဇ်စုဆောင်းမှုမှာငါတို့ကအမြတ်အစွန်းအားလုံးရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုလှူဒါန်းတယ်၊ ငါတို့ကလူနည်းစုတွေကိုယုံကြည်တဲ့၊ တရားမ ၀ င်တဲ့ဒဏ်ခတ်မှုတွေကိုလက်ခံပြီးတော့တခြားအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုတစ်လဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပြီးရောင်းနေတဲ့အတွက်ထောင်ချခံရတယ်။ ၎င်းသည်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအခွင့်အရေးများကိုဥပဒေအရတန်းတူအကာအကွယ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။
လောလောဆယ် Delta-8 ကို Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Kentucky, Idaho, Iowa, Montana, New York, Rhode Island, Utah, Vermont နှင့် Washington (Advisory Only) တို့တွင်တားမြစ်ထားသည်။ ကန့်သတ်ချက်သည် vape သို့မဟုတ် smokable delt8 ထုတ်ကုန်များမဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော် gummies soft gels များနှင့်စားသုံးနိုင်သောအရာများသည် ok ထို့ကြောင့်သင်၏ပြည်နယ်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဥပဒေများကိုသေချာစစ်ဆေးပါ၊ တစ်ခုခုအပြောင်းအလဲရှိတိုင်းကျွန်ုပ်တို့ဒီ page ကို update လုပ်လိမ့်မည်။
ဥပဒေပြုခွင့်တားမြစ်ချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်များကိုလက်ရှိတွင် Oregon, Michigan, North Dakota, Oklahoma နှင့် Illinois အပါအ ၀ င်အခြားပြည်နယ်များတွင်စဉ်းစားနေသည်။
Alabama သည် Delta 8 ကိုသူတို့၏လျှော်တောင်သူများကိုကူညီရန်တရားမ ၀ င် ၀ င်ရောက်ခွင့်ဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေကို GREEN သို့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
သင့်သူငယ်ချင်းများကို Delta 8 THC အကြောင်းပြောရန်အခြားအကြောင်းပြချက်မလိုအပ်ပါက Delta 8 THC သည် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းတရား ၀ င်သော Alabama ရှိကလေးများကိုပြန်ပေးဆွဲနေသည်။ သူကတတိယအဖွဲ့အစည်းကစမ်းသပ်ပြီးတံဆိပ်ကပ်ထားတဲ့ငါတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုဆေးလိပ်သောက်ရင်သူ့ကလေးယူဖို့မပြောနဲ့လက်နဲ့တောင်မကိုင်ဘူး။ https://www.al.com/crime/2021/06/alabama-removes-toddler-from-michigan-family-found-with-marijuana.html?outputType=amp
မင်းသူတို့ကိုပြည်နယ်တွေပိုထားဖို့မျှော်လင့်နိုင်တယ်၊ အထူးသဖြင့်အပန်းဖြေဆေးပေးခန်းတွေရှိပြီး Delta 8 ကသူတို့ရဲ့ ILLEGAL အခွန်ဝင်ငွေတွေကိုမဖြတ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ပြည်နယ်တွေဆီကနေဥပဒေရေးရာစိန်ခေါ်မှုတွေပိုမျှော်လင့်နိုင်တယ်။ ဒီမိုကရက်တို့ကဆေးခြောက်ကိုဖက်ဒရယ်အဆင့်တွင်တရားဝင်ခွင့်ပြုရန်ပြောသောအခါသူတို့သည် Delta 8 ကိုအထူးသဖြင့်၎င်းတို့သည် Black life ကိစ္စများကိုအလွန်နှစ်သက်သည်ဟုဆိုပြီးနောက်၎င်းတို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ရန်မိုက်မဲလိမ့်မည်။ သူတို့တကယ်ဂရုပြုရင်ဆေးခြောက်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုပြီးနစ်ဆင်အုပ်ချုပ်ရေးကဖန်တီးထားတဲ့အတုလုပ်ရာဇ ၀ တ်မှုကြောင့်သူတို့အားလုံးကိုထောင်ကနေလွှတ်လိုက်မယ်။
ကြည့်ရှုပါ: လူမည်းများနှင့်စစ်ဆန့်ကျင်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကိုပစ်မှတ်ထားသော ၁၉၇၁ ခုနှစ်ယနေ့တွင် Nixon ၏မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးကြေငြာချက်၏နောက်ကွယ်မှထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်း အမေရိကန်လုပ်ငန်းဌာန - AEI
အနီရောင်ဧကရာဇ် CBD အထုပ်အားလုံးသည် scannable code တစ်ခုပါ ၀ င်သောကြောင့်ဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အစိုးရရှေ့နေများသည်တားမြစ်ချက်မထားသောနိုင်ငံများ၌ဖမ်းဆီးရန်သို့မဟုတ်တရားစွဲဆိုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ မင်းရဲ့ဒေသခံအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကဒီလိုလုပ်နိုင်လား။ အောက်ပါပုံတွင်ကုဒ်ကိုစကင်ဖတ်ရန်သင်၏စမတ်ဖုန်းကို သုံး၍ ယခုစမ်းကြည့်ပါ။
မင်းရဲ့ Dispensary ကိုပိုင်ဆိုင်ချင်ခဲ့ဖူးလား။ ကောင်းပြီ၊ မင်းအခွင့်အလမ်းဒီမှာ ငါတို့သည် Delta 8 THC ထုတ်ကုန်များအတွက်အမြောက်အများနှင့်လက်ကားစျေးနှုန်းများရှိသည်။
သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်လူမှုမီဒီယာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ Delta 10 THC ရောင်းအားအားလုံး ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကော်မရှင်ရယူပါ။ စာရင်းပေးသွင်းရန် sales@RedemperorCBD.com သို့အီးမေးလ်ပို့ပါ။
CBD နှင့် Delta 8 THC ထုတ်ကုန်များကိုမည်သည့်ကုန်သည်မဆိုရောင်းနိုင်သည်။ အထူးလိုင်စင်မလိုပါ၊ အရူးအမူးအခွန်များမလိုပါ။ သင်ရှာနေတယ် အစုလိုက်သို့မဟုတ်လက်ကားမြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ၈ THC အနီရောင်ဧကရာဇ်ကွန်ယက်သည်အမေရိကန်ရှိအကြီးဆုံး CBD & Delta 8 THC လယ်ယာများကို ၀ ယ်ယူသုံးစွဲနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလက်ကားနှင့်စျေးနှုန်းစာရင်းကိုဤနေရာတွင်သင်တွေ့နိုင်သည်။
Bulk Delta 8 THC Products များ